Siyanamukela nonke enithweswa iziqu kulomcimbi wasentwasahlobo wokwethweswa iziqu ngobuchwepheshe wezi-2021 - UKZN Virtual Graduation
Unyaka wokufunda oholele kulo mgubho wempumelelo yenu ube nezinselele ezingakaze zibonwe – njengoba nazi kahle.
Okuhamba phambili ezimpilweni zenu phakathi kwezinto ezibalulekile zezemfundo kube ubhubhane lwe COVID-19 olushanele emhlabeni wonke futhi ngokusabekayo lusakhona nanamhlanje… futhi kubonakala ukuthi lusazoba khona! Ngentshisekelo yokuphepha- yenu, neyethu, futhi neyabathandekayo bethu kanye nesidingo sokuqaphela umthetho olandelwayo wezempilo – nokuthi umcimbi wokwethweswa iziqu uphinde futhi ubanjwe ngobuchwepheshe.
Kuyinhlonipho ekhethekile, uma kubhekwa isimo enedlule kuso ukuthi nibe lana namhlanje, ukubungaza kanye nani lomcimbi wokwethweswa iziqu ngobuchwepheshe weNyuvesi yaKwaZulu- Natal eklasini lokuqala lowezi-2021.
ISekelashansela noMphathi, uSolwazi Nana Poku, uzonikeza ngokusemthethweni iziqu kubo bonke abafundi abaphumelele ukuthola imfuneko yezifundo zabo, aphinde futhi anikeze iziqu kulabo sebashona.
Amaphini eSekelashansela azokhuluma nabathweswa iziqu bese kuthi abaphathi badlulisele imiyalezo yabo yokuhalalisela abafundi bethu abathweswa iziqu.
Umcimbi uzosakazwa bukhoma kwisizindalwazi somgidi wokwethwesa iziqu sase-UKZN: https://virtualgraduation.ukzn.ac.za. Abafundi bethu namalungu omphakathi wenyuvesi azokwazi ukuhlanganyela kulomcimbi ngalesi sixhumanisi.
Lolu usuku olukhethekile empilweni yabafundi bethu kanye nenyuvesi, futhi akungabazeki ukuthi nizowuqopha lomgubho nithathe nezithombe. Siyanikhuthaza ukuthi nengeze emoyeni wenjabulo walo mcimbi omangalisayo ngokwabelana ngalezikhathi ezikhumbulekayo kwi heshithegi yethu: #UKZNspringGrad2020
Umcimbi wokwethweswa kweziqu weminyaka yonke iphakathi kwekhalenda lethu lezemfundo. Ngakho sikhuthaza amalungu omphakathi wase nyuvesi ngokujwayele ukuthi ubambe iqhaza ngenkuthalo ezinkundleni zokuxhumana ukubungaza kanye nabafundi bethu. Siyakwazisa ukwesekwa kwenu ekwenzeni lomcimbi bunyazi ube impumelelo.
Ngiyacela nibungaze ngokuzibophezela futhi nigcine imithethonqubo yezwe yeCOVID-19 yokuthi siqhelelane, sigqoke izimfonyo sigcine nazo zonke izinyathelo eziphathelene nezempilo.
Nihlale niphephile futhi nizinakekele.
Umqondisi Olawulayo: Ezobudlelwano Besikhungo
PrevPreviousUmyalezo weSekela Shansela Ngokwethweswa Kweziqu Kwabafundi Bango-2021
NextKusuka kwithimba lezobudlelwane kwabafundi asebegogodileNext